Manni murtii Aanaa Magaalaa Galaan Gaazexeessituu Marasat Dhaabaa akka hiikamtuu ajaja dabarse. – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosManni murtii Aanaa Magaalaa Galaan Gaazexeessituu Marasat Dhaabaa akka hiikamtuu ajaja dabarse.
Manni murtii Aanaa Magaalaa Galaan Gaazexeessituu Marasat Dhaabaa akka hiikamtuu ajaja dabarse.
Manni murtii Aanaa Magaalaa Galaan olmaa Bitootessa 8/2013 ooleen, Gaazexeessituu Marasat Dhaabaa akka hiikamtuuf ajaja dabarsuusaa miseensi Gurmuu Abukaattota hidhamtoota siyaasaa Aadde Hiroowaaq Girmaa OMN-tti himte.
Gaazexeessituu Masarat Dhaabaa ji’a dura tika mootummaatiin magaalaa Finfinnee mana jireenya ishee keessaa kan qabamte yoo ta’u, hanga yoonaa Abbaan alangaas ta’u poolisiin himata yookaan galmee yeroo beellamaa akka itti hin banin jiru, abukaattoon ishee kun ni dubbatti. Sababa himannoon itti hin banamin jiruuf, iyyannaa ‘qaama ofii biliisa baasuu’ jedhu mana murtiif dhiheessuu isaanii kan himtu Abukaattoon hidhamtoota siyaasaa Aadde Hiroowaaq Girmaa, iyyata isaanii kanarratti hundaa’uun manni murtii magaalaa Galaan guyyaa kaleessaatti, Qajeelchi poolisii Galaan, Koomishiiniin Poolisii Oromiyaa akkasumas Waajjirri abbaa Alangaa deebii akka dhiheeffatuuf beellama taa’ee akka ture yaadachiisti.
Olmaa kaleessa manni murtii Aanaa magaalaa Galaan ooleen, qaamoleen akka dhihaataniif ajajaman sadanuu kan hin dhihaanne yoo ta’u, Gaazexeessituu Masarat Dhaabaas mana hidhaatti ittifamuu ishee Abukaatoon ishee kun OMN-tti himtee jirti. Manni murtichaa guyyaa har’aa jechuun Bitootessa 8/2013 dhaddacha ooleen, qaamni Gaazexeessituu Masarat Dhaabaa himate amma ammaatti waan jirreef, biliisa akka baatu murteessuun, galagalacha ajaja kanaas Koomishiinii poolisii Oromiyaaf, Qajeelcha poolisii Galaanii fi waajjira Abbaa Alangaatiif barreeffamuu OMN odeeffateera.
Miseensi Abukaatota hidhamtoota siyaasaa Aadde Hiroowaaq Girmaa, Oromiyaa keessatti ajajni mana murtii kabajamuu dhabuun olaantummaa seeraa cabaa jiraachuusaaf agarsiiftuu akka ta’e himuun, ajaja manni murtii Aanaa magaalaa Galaan har’a dabarse ni kabajama jedheen abdadha jechuun dubbatti
Marii Haala yeroo irratti hayyoota Oromoo waliin
OMN Horn: ዕለታዊ ዜና (Mar 17, 2021)
OMN Horn: Oduu (Bit 17, 2021)
Via Abdurazak Dube.
“Zak Itti gaafatamaa Waajjira #Bilxiginnaa_Nageellee_Arsii Kan turee fi Bulchaan Aanaa Goljootaa Ammaa Bariisoo Bullii Ajjeeffame amma Poolisiin reeffa karaa irraa kaasaa jirti. “
Jibbi BILXIGINNAA jibba Jaal Daawud Ibsaa ykn jibba #Jawar Mohammed ykn jibba #BekeleGerba